Maamulka Hir-Shabeelle oo Dowladda ka codsaday in ay u soo gurmadaan-Dhegayso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Maamulka Hir-Shabeelle oo Dowladda ka codsaday in ay u soo gurmadaan-Dhegayso
Maamulka Hir-Shabeelle oo Dowladda ka codsaday in ay u soo gurmadaan-Dhegayso
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamad ayaa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay sidii ay wax uga qaban lahayd xaaladda ammaan ee deegaanada ay Maamulaan.
Sheekh Cismaan Barre ayaa sheegay in Hir-Shabeelle aysan waxba ka qaban karin amni darada iyo weerarada Al-Shabaab ka geystaan deegaanadooda, xili uu ka hadlayey furitaanka kalfadhigii seddexaad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxa uu intaasi ku daray Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamad in dagaalamayaal ka tirsan Shabaab oo ka yimid gobolada dalka ay ku sugan yihiin inta u dhaxeysa Balcad iyo Afgooye.
“Waxaan ka codsanaynaa Dowladda Federaalka ah in ay wax nagala qabato amni darada ka jirta Hir-Shabeelle ma ahan mid aan ku filanahay kaliya, sida la socotiin inta u dhaxeysa Afgooye iyo Balcad waxaa ku sugan Shabaab oo isaga kala yimid gobolada dalka”ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Hir-Shabeelle.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in wadada isku xirta Muqdisho iyo Balcad si nabad ah la isugu mari jiray, balse haatan ay go’day.
Madaxda Maamulka Hir-Shabeelle ayaa dhawaan sheegay in Maamulkooda uu yahay Maamul curdun ah, isla markaana aanu awood u lahayn wax ka qabashada amniga darrada deegaanada, iyagoo ka dalbaday Dowladda Federaalka inay kala shaqeeyaan sugidda amniga.